Daawo:-Maxaa hor taagan in uu Dagaal ka dhaco Deegaanka Tukaraq,maxaase la gudboon Dhulbahante-Video+Warbixin | | Horufadhi Online
Monday, February 12th, 2018 | Posted by ho
Daawo:-Maxaa hor taagan in uu Dagaal ka dhaco Deegaanka Tukaraq,maxaase la gudboon Dhulbahante-Video+Warbixin
Muddo ka badan hal bil waxaa deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool isku horfadhiya Ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa Puntland, tan iyo markii ciidanka Soomaaliland ay qabsadeen deegaankaasi 8-dii bishii January ee sanadkan 218-ka iska hor imaad aan dhiig ku daadan oo mudo kooban socday.
Ciidamadda labada dhinac oo isu jira masaafo aad u yar ayaan weli gelin dagaal rasmi ah oo ay fool ka fool iskaga hor yimaadaan,waxaana Deegaanka maalinba maalinba maalinta ka danbaysa soo gaadhaya boqolaal Ciidamo ah iyo gurmad u imaanaya labada dhinac ee isku hor fadhiya deegaanka.
Haddaba maxaa hor taagan in Dagaal uu ka dhaco Tukaraq?
Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa markii Soomaaliland qabsatay deegaankaasi Tukaraq waxaa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay inay iska difaacdo Soomaaliland hase yeeshee ay tixgelinayso codsiyada Beesha caalamka iyo Dalalka deriska ah uga imaanaya, taas oo u muuqatay inuu jiro cadaadis Beesha caalamku ku dooneyso in ay dhex dhexaadin ka samayso labada dhinac isla markaana lagu xaliyo xal siyaasadeed oo kale xiisadda ka taagan Deegaanka Tukaraq.
Dhanka kalena, maamulka Soomaaliland ayaa diidey inuu ka baxo deegaankaasi waxaana ay sheegeen inuu yahay Dhul uu siiyey maamulkii gumaystihii Ingiriiska oo maamuli jirey deegaamada maamulkaasi sheegayanayo oo ay Tukaraq oo ay dhawaan qabsadeen ka mid tahay,halka Maamulka Puntland isna sheeganayo dhul badan oo hadda Somaliland ka arrimiso,sidda Sool oo dhan qaybo Sanaag kamid ah iyo Buuhoodle.
Dadka ka falanqeeya arrimaha Colaadaha iyo Deegaanka ayaa iyaguna qaba in sababta labada dhinac midkoodna Dagaal u qaadi wayay ay tahay arrimo dhaqaalle xumo oo ay ka siman yihiin Puntlamd iyo Somaliland,taasna ay keenayso in uu midkoodna ku deg degin Dagaal ka qarxi Deegaanka.
Haddaba qaar kamid ah Siyaasiyiinta Beelaha degga Gobolka Sool ayaa sheegay in wax kasta la diyaariyey haseyeeshee dagaalka ay hortaagan tahay Beesha Caalamka oo Muuse Biixi ka dhaadhicinaysa inuu ku laabto deegaanka Gambadha oo hore fadhiisin ugu ahayd Ciidanka Maamulka Somaliland ee hadda gaadhay Tukaraq.
Maxaa la gudboon Dhulbahante oo ah Dadkii lahaa Deegaankan lagu Hardamayo?
Mar haddii xaalku yahay Puntland waxay ku qanacsan tahay in lagu laabto Gambadha iyaduna kusoo laabato Tukaraq oo dhulka kale ee SSC,na sii haysto Somaliland,Somaliland,na ay ku qanacsan tahay in ay tagto Geedka Yoocada oo Duleedka Garoowe ah maxaa la gudbnoon umaddii lahayd dhulkan lagu Hirdamaayo?.
Short URL: https://horufadhimedia.com/?p=57148
Posted by ho on Feb 12 2018. Filed under wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
4 Comments for “Daawo:-Maxaa hor taagan in uu Dagaal ka dhaco Deegaanka Tukaraq,maxaase la gudboon Dhulbahante-Video+Warbixin”
February 12, 2018 - 8:57 am
Aad baad u mahadsantihiin Bahda Horufadhi.com , si fiican baad u qeexday arimaha hortaagan in dagaal dhaco , aniga waxay ila tahay Beesha caalamku ma hortaagna dagaalka Tukaraq hase ahaatee waxaa waxaa hortagan duruufo dhaqaaleoo haysta labada dhinac ee isku horfadhiya deegaanka ayaa jirta. Somaliland waxaa haysta lacag la’aan iyo sixir barar uu dollarkii kufsaday shilinkii Somaliland oo wax kastaa qaaliyoobay , cashuurtii Dekeda Berbera waxaa gurta Ajaaniib Imaaraatka Carabta oo waxii cashuur ay qabtaan shirkada DPWORLD waxaa la geeyaa Dubai , shilin ma haystaan dawladu sidaa darteed waxa yar ee kastamada laga ururriyo ma dhaafto hunguriga Jeegaanta iimaanka la’ ayaa qaydhiinka ku kala goosta , hada waxii yaraa ee lagasoo guray Islaanta tamaandhada iibisa, caanalayda , saqadlayda iyo bacadlaha waxaa afka u dhigta Wasiirada Jeegaanta ayaa Bangiga dhexe kala baxa maalinkasta . Waar meesha la is qalanayaa adiguna dagaal baad ka sheekaynaysaaye.
Dhankaas Puntland waa la mid oo ma helaan mana haystaan maalgashi iyo caawimooyin , ayaguna waxay gacanta ka saareen Dekedii Bosaso DpWold oo maamusha , waa cajiib Ajaanibta Imaaraatka Carabta anagu shidaalkooda lama maamulo hal litir oo bilaash ah kama helo ayagiina waa kuwasi la wareegay cashuurtii Berbera iyo Bosaso.
Adeerayaal Askarta Masaakiinta ah ee caruurtoodu aanay helin waxbarasho, caafimaad, biyo nadiif ah iyo adeegii bulshadu dhamaan ka maqanyahay maxaa loo dagaal galin ee la iskugu diri . Meeshaas waxaa ku dhimanaya dad masaakiin ah oo la yidhi Askar Qaran baad tihiine laaya dadkoo dhan , waan ka xumahay in Daraawiishtii Dhulbahante ee xoreysay Somaliland ee keentay Xoriyadii 1960 maanta ay laba reer isku dhuftaan oo ayadoo aan wax lacag la siinin la yidhaa is laaya oo is dila.
Aeer waxaa xal ah in Ciidanka Somaliland dib ugasoo ruqaansado dhulka Daraawiishta , sidoo kale Ciidanka Puntlandna dib uga baxaan Gobolka Nugaal oo dhan deetana Dhulbahante dhulkiisa gacanta ku qabsado, hadhaw dhankuu doono ha raaco markay tashadaan lkn fursad hala siiyo Dhulbahante oo hala daayo in dhulkaasi noqdo meelo lagu moransanyahay.
February 12, 2018 - 2:54 pm
@Samaroo, waa war wanaagsan. Lkn Garowe dhulkan SSC way ku maxaafsataa oo faa’iido siyaasadeed iyo mid dhaqaalaa ugu jira. Mar la arkaba marka dawladda dhexe doorasho ka jidho ololahay ku gashaa, oo baarlamanka federaalkay soo xulataa. Haddii PL laga jaro SSC, meel qaawan bay soo istaagayaan oo culaysbadan kuma yeelanayaan federalka. Marka marna SSDF laga sugimaayo in ay si fudud faraha ugala baxaan dhulka Daraawiishta.
Dhinaca kale, SNM iyaduna sidaa si le’eg waa mid siyaasadeed iyo dhaqaale. Ictiraafkiibaa ka galay, shirkado shidaalna lacagay kaga qaataan shidaal baad ka baaraysaan.
Marka ninkan dhulkiisa sidaa qabaa’ilaad isugu haystaan maxaa la gudboon? Waxaa la gudboon, sidaan qabo, in shirkaa la iclaamiyay la isugu yimaaddo oo si mug leh looga arrinsado xaalka. Waxaanan indhaha laga qarsan karin in dawladda dhexe hagratay goboladan.
Haddii marka ay dawladda dhexe dhabarka u jeediso abaabulka shirka iyo doonista shucuubtan oo ay taageeri waydo maamul ay yeeshaan, dee khiyaar kale ma hayo anigu aan ka ahayn in si wadar ah wadahadal toos ah loola furo Hargaysa.
February 13, 2018 - 1:36 am
Horta Dhulbahante waa niman waalan. Tol qabsadana malahan, sababtaan u iri waxay tahay. Malahan waji loogu hagaago oo qolo walba labada maamul koox Dhulbahante ahbaa hor boodin.
Kuwa ay la socdaana waa danaystayaal jah wareer ku jira. Dhulbahantana xooggiisii taladaa alle hareer marshay.
Talo ehelnimo waxaa iga ah Meel isku raaca wixii idiin ka soo horjeestana afka ciida u dara.
Waxaad tihiin qabiilo kala baqaya oo aanan lahayn laandheere aano reer dhabarka u rita 400 oo nina madaxa ka jara.